गैंडाकोटमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि छलफल
गैंडाकोटमा फेरी विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि छलफल सुरु गरिएको छ । यसअघि पनि गैंडाकोटमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि छलफल गरिएको थियो । सोही छलफललाई आधार मान्दै अहिले फेरी प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयबारे द्धितिय परामर्श गोष्ठि सुरु गरिएको छ । पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा बन्ने प्रस्तावित विश्वविद्यालयको स्वरुपका विषयमा नारायणी रिसोर्ट गैंडाकोटमा सरोकारवालाहरु छलफलमा जुटेका छन् । प्राविधिक समूहको विद्यागत विषयहरुमा कार्यशाला संचालन गरिने पनि जनाईएको छ । नारायणी रिसोर्ट गैंडाकोटको सभाहलमा उद्घाटन गरिएको कार्यक्रमका ३ दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम हुने जनाईएको छ ।
नेपाल विश्वविद्यालय निर्माणक्रममा कति लागत लाग्छ , कति समय लाग्छ , कसरी सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिसंग कसरी सहकार्य गर्ने आदि विषयमा छलफल गरिने र त्यसबाट निष्कर्ष संगै रिपोर्ट बनाईने विश्वविद्यालय स्थापना कार्यदलका संयोजक डा. प्रमोद ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाले गंंैडाकोट नगरपालीकामा विश्वविद्यालयको सम्भावना संगै उचित बातावरण रहेको जनाउदै यसले गैंडाकोटलाई नै फाईदा पुग्ने बताउनुभयो ।
डा. अर्जुन कार्कीले विश्वविद्यालयलाई गैंडाकोटबासीको सम्पत्ति रहेकाले आफ्नो ठानेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । गैंडाकोटमा विश्वविद्यालय बनाउन मुलुकका प्रबुद्ध व्यक्ति लागिपर्नु नै यसको राम्रो पक्ष रहेको औल्याउनुभयो । उहाले स्थानीय , सरोकार्वाला र बुद्धीजिवीको हातेमालो भए अगाडी बढन सजिलो हुने बताउनुभयो ।
अहिले धेरै व्यक्ति बिदेश पलाएन भएको अवस्था रहेको बताउदै प्रदेश सांसद ओमकला गौतमले यहि पढने र काम गर्ने माहौल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश सांसद बिष्णु लामिछानेले गैंडाकोट नगरपालिकामा स्थापना हुन लागेको नेपाल विश्वविद्यालयलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । साथै उहाले स्थापना गर्न लागिएको उद्धेश्य जनमानसमा पुर्याउन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद कृष्ण पौडेलले हरेक क्षेत्रमा निर्माण र समृद्धीको बिषय उठान भईरहेको समयमा विश्वविद्यालयको स्थापनार्थ छलफल हुनु सबैको लागि राम्रो भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले शिक्षालाई राजनीतिले धेरै प्रभाव पारिरहेको बताउनुभयो । शिक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा राजनीति भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो नहोस् भन्ने चाहाना रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । उहाले गैंडाकोटमा नै विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि २ वर्ष अघिदेखी बिभिन्न कार्यहरु भईरहेको पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश प्रतिपक्ष दलका नेता , सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीले गैंडाकोटमा विश्वविद्यालय बन्नु गौरवको कुरा रहेको बताउनुभयो । उहाले गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि शिक्षाको विकास र विश्वविद्यालयको स्थापना र विकासमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीहरु र बौद्धिक व्यक्तित्वको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रम गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलको अध्यक्षतामा भएको थियो भने सहजीकरण करुणासागर सुबेदीले गर्नुभएको थियो ।